Ka jawaab celinta Musiibada - Gargaarka Gargaarka ee Musiibada
Bogga ugu weyn/Jawaabta Musiibada
Xoog-adkaysiga iyo Aqlabiyadda New Florida
Qaab-dhismeedka Dadweynaha ee Jawaab-celinta Musiibada: Dib-u-qoridda Xeerarka Soo-kabashada ka dib Musiibooyinka Cimilada
Markii goolalku jabeen wixii ka dambeeyay duufaantii Katrina ee 2005, sawirada burburka iyo quusta waxay bilaabeen wada hadal qaran oo ku saabsan aafooyinka, sinaan la'aanta iyo isbedelka cimilada. Inta badan wadahadalka waxaa diirada lagu saaray sida ugu wanaagsan ee bulshada loogu diyaarin karo masiibooyinka mustaqbalka
Soo-kabashada West Street
Daaqad Daaqad Furan: Jadwalka
Dhibaatada, daaqad fursadeed ayaa la furay. In kasta oo wax kasta oo kale khaldan yihiin, in kasta oo murugo iyo lumitaan,
inkasta oo gacmaha la bixiyo si loo dhaqan geliyo sharciga iyo kala dambaynta oo aan la gaari karin, iyo in kasta oo aan lahayn aasaasyo badbaado, haddana waxaan ku dhacnay fursad aan ku caddeyn karno nafteenna iyo midkeenba midka kale inaan nahay dad.
Daaqad Lagu Furay Furan II: Casharrada Laga Bartay Abaabulka Kadib Duufaantii Harvey
Hawlaha dib u soo kabashada ee Houston way ka fog yihiin, laakiin lixdii bilood ee la soo dhaafay, waxaan baranay waxyaabo badan oo badan.
Daaqad Lagu Furay Furan III: Milicsiga Labadii Sano ee Harvey Work Work
Waxaa jira calaamadda wali sudhan albaabka hore ee guriga oo ku yaal West Street halkaasoo West Street Recovery (WSR) ay ka billowday toddobaad badbaadinta doonta sida duufaantii Harvey ka gudubtay Houston.
Gargaarka Musiibada ee Isku-Duwaha
Warqad Jaceyl ah oo Mustaqbalka ah: Iscaawinta labada dhinac & dhismaha awoodda inta laydhadhku dansan yihiin
Duufaannada ayaa imanaya. Biyaha ayaa meelaha qaar kor uga kacaya meelo kalena ku madhan. Xaaladda qaxootigu hadda waa uun indha indheynta waxa ay si fiican u noqon karto markii aan aragno natiijooyinka iniinyaha aan ku beerannay ee qoyan la'aanta, isbeddelka cimilada, magaalaynta, iyo soosaarida shidaalka.
Ururka Waxqabadyada Degdegga ah ee Kanada
Xirfadaha Samatabbixinta Aasaasiga ah
Ujeedada buugyarahani waa in la baro xirfadaha aasaasiga ah ee shaqada samatabbixinta.
Kala -guurka US
Diyaargarow: Dhis Adkaysiga Gudaha & Xarumaha Adkeysiga
Tusaha adkaysiga ee 20 -ka Cusub
Dhakhtarka ee Masuuliyada Bulshada
Tilmaamaha Muwaadinka ee u Diyaargarowga Cimilada Xad-dhaafka ah ee Xeebta Koonfur Galbeed
Dhisidda adkeysiga: u diyaargarowga ka hortagga iyo maaraynta saameynta dhacdooyinka cimilada daran.
Fahamka Fowdada Qaab-dhismeedka Fahamka Musiibooyinka
Ujeeddada koorsadan ayaa ah in lagaa dhaqaajiyo naftaada oo laga gudbo fekerka aan dhammaanteen qabno: in adduunyada abaabulan, ee hay'adaha ah sida aan ognahay inay sii jiri doonto.
Dukumentiyada Dhismaha ee Caddaaladda Cimilada: Naqshad Dimuqraadi ah oo loogu talagalay Bulsho Difaaca Cimilada
Adoo ka fikiraya labada geeddi-socod iyo wax soo saar ee naqshadaynta adkeysiga,
waxaan kaa caawin karnaa bedelida dadaallada naqshadeynta adkeysiga si ay waxtar badan u yeeshaan
beelaha la hayb sooco ee safka hore ee isbedelka cimilada.
podemos ayudar cambiar a los esfuerzos de diseño resiliente para Ser
Ricchi w / Gargaarka Musiibada ee Gargaarka Mutual
Ku Riyoodeenna Gacanteena: Isku Xirnaanshaha, ku tiirsanaanta (ter), iyo Dib Ulaabashada Wada Wadajirka
"Waxay u egtahay in bambaanada atomku kacday," ayuu yiri Boricua maxalli ah (sida dadka ku dhasha Puerto Rico inta badan loogu yeero) aragtida buuraha maalin kadib markii ay Maria dhaaftay. Laan kasta iyo geed kastaaba waa la jeexjeexay oo la jebiyey, meel walbana lagu kala firdhiyey. Aag kasta oo cagaarnaa wuxuu ahaa cawl iyo bunni. ”
Qiyaas Shaqooyinka Biyaha
Bal qiyaas Shaqooyinka Biyaha 'Tusaha Duufaanta ee 2021
Ku soo dhowow xilliga duufaanta ee Louisiana! Waan ognahay in xilligan sannadka ah uu si gaar ah u walaac badan yahay, sidaa darteed waxaan aad ugu dadaalnaa inaan ka dhigno sannadlahaan Bal qiyaas Shaqooyinka Biyaha: Tusaha Xilliga Duufaanku sida war-bixineed, wax-ku-ool ah, oo sax ah intii suurtogal ah.
Gargaarka Musiibada ee Isku-Duwaha: Casharadii la Bartay
Waxaan wadaagnaa casharradan, annagoo ogsoon inay jiraan kuwo badan oo innaga oo kale ah: shaqsiyaad, ururro, ururro, shabakado, iyo dhaqdhaqaaqyo si kalgacal leh, geesinimo leh u qabta shaqada kacaanka, iyagoo ku dadaalaya inay dhulka ka shaqeeyaan anshaxa daryeelka iyo is-caawinta. Musiibooyinku mar dhow waxay noqon karaan wax caadi ah. Marar badan ayaa jiri doona waddooyinka na horyaalla marka aan jawaabo fudud laga helin. Laakiin waxaan dooneynaa inaan idinla wadaagno wixii aan kasoo xaalufinay waqtigeena markaan shaqadan qabanay, anagoo rajeyneyna inaad dhisi kartaan guulaha aadna iska ilaalin kartaan qaladaadki hore ee soo noqnoqoshada noocan ah abaabulka.
Khariidadaha Mad ee cudurka faafa
Waqtigan waa xilli adag, inteena badanna waxaa saaran cadaadis aad u weyn. Waxaa laga yaabaa inaan la kulanno go'doomin, jirro, dakhli lumis, cabsi u qabta kuwa la jecel yahay, lumitaanka kuwa aad jeceshahay, walaac, iyo xaalado kale oo badan oo xanuun badan. Khariidad waalan ayaa ah hage aan nafteena u sameysan karno, badiyaa sida ugu fiican ee looga shaqeeyo daqiiqadaha waxaan dareemeynaa udub dhexaad ama awood dheeraad ah, inaan u weecan karno daqiiqado ay wax dhinac u socdaan ama aan dareemeyno inaan nafteenna ku sii siqeyno gobollo aad u dhib badan.
Bartamihii-Noofambar 2018, qiiq ka dhashay dabka ka holca waxa loogu yeero Kaliforniya wuxuu u leexday salka gurigeyga, socollen Michigan, iyadoo dadka iyo dad aan bini'aadam ahayn ee ku teedsan Xeebta Galbeed ay la halgamayaan inay neefsadaan, oo ay u halgamayaan inaysan u dhiman ugudambeyntii ugu dambeysay "taariikhi ah" ee caasimadda. / masiibo cimilo-shidaal dowladeed.
Practicas Seguras Para Apoyo Mutuo y Distribucion de Alimentos Durante la Pandemia de Coronavirus (Dhaqdhaqaaqyo Dhaqameed)
rápidamente por personas que no saben si son portadoras. La infección puede amenazar la vida, gaar ahaan dadka ancianas o inmunodeprimidas.
Maxaabiista Musiibada: Dhaxalka xadgudubka, dhiig-miirashada iyo khatar gelinta maxaabiista musiibada ku jirta.
Waqtiyada masiibada aan dabiiciga ahayn, maxaabiista waxaa lagu xiraa xarumaha hay'adaha duufaanka iyo aagagga daadguraynta qasabka ah si joogto ah ayaa looga tagaa 'hoyga meesha' halkaas oo ay ugu adkeystaan ​​xaalado argagax leh oo qatar ah. Isla mar ahaantaana, shaqada maxaabiista waxaa ka faa'iideysta gobolka iyo shirkadaha si isku mid ah maxaabiista si joogto ah ayaa loo dhigaa aagagga hore ee masiibooyinka cimilada si ay ula kulmaan olol iyo daadad isku mid ah oo aan waxba ka xigin maalintii.
Dib-u-eegista New York & Molly Crabapple
Puerto Rico ee Musiibada DIY DIY
Musiibooyinka dabiiciga ahi waxay leeyihiin hab ay wax ku caddeeyaan. Waxay ka takhalusaan khiyaano hal mar ah, si ay u muujiyaan khasnadaha duugoobay iyo nabarradii hore.
Wadajir Diyaarso: Buugga Diyaargarowga Degdegga ah adiga iyo deriskaaga
Ready Together waa martiqaad inaad adiga kula kulanto deriskaaga si aad isugu diyaariso wax kasta oo ku soo mara. Iyada oo ay la socoto Buuggan Diyaargarowga Degdegga ah, ReadyTogether.Net wuxuu bixiyaa warar iyo ilo dheeraad ah.
Cristina Lugo w / Gargaarka Musiibada ee Gargaarka Mutual
Recursos para trauma y arte terapéutico: información y actividades para niños, iskaa wax u qabso iyo familias
Qalabkan kaydka ah waxaa loo sameeyay CAMBU (Las Marias, PR) iyadoo la filaayo in lagu soo bandhigo aqoon isweydaarsi halkaas ka dhacay oo aan isku keenay (oo lagu soo daray buuggan). Waxaan dareemay inay muhiim tahay in laga caawiyo qalabaynta CAM-gaan qalab iyo agab aasaasi ah oo ka caawin kara hagista mutadawiciinta, macalimiinta iyo waalidiinta shaqadooda dhalinyarada.
Adkeysi & Wadajir u Diyaar ah: Tilmaan u -Diyaargarowga Awood -u -yeelashada iyo Ka -hortagga Masiibooyinka
Awooddeena ah inaan si macno leh uga jawaabno xilliyada musiibadu waxay ka bilaabataa gurigayaga, annagoo ku sii fidaya wareegyada taageerada ee aan ka abuurno xaafadaha iyo bulshooyinka.
Ku Dhaqanka Badbaadada ee Qeybinta Gargaarka Cuntada & Bixinta Inta lagu Jiro Faafida Coronavirus
Zine-kan ayaa ah isku-duwidda degdegga ah ee kheyraadka soo socda ee laga heli karo khadka tooska ah ee internet-ka si loogu taageero mashaariicda ku saleysan gargaarka ee wadaagga ah ee adeegyada u siinaya bulshadooda iyadoo ay jirto fiditaanka COVID-19
Kacbada Waqooyiga Ameerika
Joogitaanka Biyaha Sare: Socdaalka caalamiga ah ee dhibaatada cimilada
In ka badan 30 sano ka hor saynisyahano hormood ah oo ka socda NASA waxay bilaabeen inay uga digaan siyaasad dejiyeyaasha in heer kulka aduunku sii kululaanayo natiijada ka dhalata qiiqa kaarboonka iyo gaaska kale ee lagu koriyo.
Nib, Vulpes, iyo Gargaarka Musiibada ee Is-kaashatada ah
Wadajirka Badbaadinta: Duulaanka Marka Musiibo Dhacdo
Waqtiga masiibada cimilada, ku noolaanshaha New Orleans macnaheedu waa inaad si joogto ah uga feejignaato xiriirkeena qunyar socodka ah ee deegaanka.
Xisbiga Duufaanta - Diyaar U Ah New York?
Burburinta Burburka: Hagaha Xilligii Duufaanta ee 2013
Waxa gacmahaaga ku jira ayaa ah hage horudhac ah oo lagu degganaan karo aafada xilligan jirta, in la dejiyo istiraatiijiyad loogu talagalay duufaannada soo socda, iyo in mustaqbalka laga dhuuqo daamanka guuldarada. Waxaa jira wadooyin badan oo dhinac u janjeera, laakiin hal waddo oo keliya ayaa la mari karaa.
Shisheeye Ku Jira Cidlo Xiran
Qaado Waxa Aad U Baahan Tahay Oo Isku Diyaari Inta Kale
Aragtida ilbaxnimada ka dib waxay muujineysaa in halka ilbaxnimadu tahay, asalkeeda, aan la sii wadi karin oo aan la rabin, habka ay tahay inaan u dhaqaaqno waa horay, ee dib uma noqonayso. Zine-kan wuxuu ururiyaa lix maqaal oo ay qortay Margaret Killjoy oo markii ugu horreysay ka soo muuqatay majaladda Alan Moore ee Dodgem Logic intii u dhaxeysay 2010-2011.
La wadaagi karo
Adkaysiga Aynu Rabno: Hagaha ka dhigaya Bulshaddaada meel bannaan inay noqoto xarun loogu talogalay adkaysiga maxalliga ah iyo gargaarka is-kaashatada
Tilmaamahan wuxuu soo bandhigayaa aragtida iyo tusaalaha "hubinta adkeysiga" - oo ah meel ay dadku ku faani karaan degganaantooda, isla baran karaan xirfado cusub, isla markaana bixin karaan baahiyaha aasaasiga ah, u diyaargaroobi karaan carqaladeynta, iyo dhisidda bulsho ka kooban oo farxad leh.
Inaan Daaweeyo Waa Inaynu Ka Hortagno, Si Aan U Xakameyno Waa In Aan Isagaaarnaa: Aalad Si Aad U Dhex Galiso Murugada
Mararka qaar, waxay kaliya ku timaaddaa masiibooyinka aan ku soo bandhigno awood taas ku jirta
lama qiyaasi karo ama lama qeexi karo. Mararka qaar mugdigu waa shumacayaga. Mararka qaarkood nabarradeennu waxay iftiiminayaan waddadeenna. Marmarka qaarkoodna bogsashadu waxay ku dhacdaa, siyaabo wareegsan, hareeraha iyo gudaha oo dhan.
Kala-guurka Waa Lama-huraan, Caddaaladdu Maaha: Qaab-dhismeed Halis Ah Oo Loogu Talo Galay Soo Kabashada Kaliya
Masiibooyinkii sanadkii la soo dhaafay waxay qalbiyadeenna iyo cinwaankeenna ka buuxiyeen burbur, murugo, iyo naxdin qoto dheer. Waxaan u dirnaa jacaylkeena qotoda dheer, naxariista, iyo xooggeenna kuwa adduunka oo idil ee hadda ku nool dhibaatooyinka musiibooyinkaas ka dib - dib u dhiska dareenka guriga, u barooridda kuwa lumay, iyo macno u yeelashada xaqiiqadooda cusub.
Markay Bulsho kastaa Jirto Meeris
Wadajirka xagjirka ah ee loo maro Covid-19 abaabulka bulshada ee wadajirka iyo wadajirka caafimaadka ayaa ka sameysmay meelo badan oo ka mid ah coronavirus-ka cusub (Covid-19).
Markii Aan Gacanta Gatoradeynay Waxaan Ku Ciyaarnay Wadada
Dhammaan waxyaabihii aad ugu baahnayd inaad ogaato oo aadan waligaa rabin inaad ogaato. Hagaha badbaadada badbaadaha.
La shaqaynta aagaheena Detroit gargaarka wadajirka ah waa la fidiyay
shaqaalaha #mutualaid oo ka jawaabaya Houma
Co-Op South Philly Food @spfoodcoop: Jimcahaan
Qashin -qubka ayaa lagu nadiifiyaa Houma.
Mahadnaq weyn Beerta Ally iyo Red Moon @redmoonfarm f
Tilmaam gaar ah oo ah dadaallada bulshada ee LaPl
Dhuxul eygii distro ayaa nala soo baxay LaPl